शुटि star स्टार: यो के हो, यसको उत्पत्ति र विशेषताहरू के हो | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले एक देख्नु भएको छ शुटिंग स्टार र तपाईले खास कुरा गर्नुभयो एक इच्छा बनाउन को लागी। तारांकित रातमा, एउटा सफा आकाशले विशेष गरी वर्षको कुनै खास समयमा तारेहरू खिच्न सक्छ। यद्यपि वास्तवमा शुटि star्ग तारा के हो? के यो हानिकारक हुन सक्छ? यो कहाँबाट आउँछ?
यस लेखमा हामी तपाइँलाई शूटिंग स्टार, यसको उत्पत्ति, विशेषताहरू र जिज्ञासाको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
1 शुटि star स्टार के हो
2 ती कहिले देख्न सकिन्छ?
3 उत्पत्ति र शुटिंग स्टारको इतिहास
शुटि star स्टार के हो
एक शुटि star स्टार (वा उल्का पिण्डहरू, जो उस्तै हुन्) एक सानो कण हो (सामान्यतया मिलिमिटर र केहि सेन्टीमिटर बीच)। उच्च गतिमा पृथ्वीको वातावरणमा प्रवेश गर्दै, तिनीहरूले हावा घर्षण को कारण "जला" (वास्तवमा, चमक आयोनाइजेशनको कारणले हो) र तिनीहरूले एक प्रकाश मार्ग उत्पादन गर्दछ जुन आकाशबाट द्रुत रूपमा पार हुन्छ, जसलाई हामी शुटि star स्टार भन्छौं।
यसको उपस्थिति धेरै विविध छ। तिनीहरू धेरै वा थोरै चम्काउन सक्छन्। यसको प्रक्षेप छोटो वा लामो हुन सक्छ। केहीले केही समयको लागि उज्ज्वल ट्रेल छोड्दछन्, जबकि अरूले गर्दैनन्। तिनीहरू प्रायः छिटो हुन्छन् (हामीसँग बोल्ने समय हुनु अघि तिनीहरू हराउँछन्!)। तर केहि धेरै ढिलो छन् र केहि सेकेन्ड टिक्न सक्छ। कहिलेकाँही तिनीहरू केहि रंग देखाउँछन्: रातो, हरियो, नीलो, आदि। उल्काको रासायनिक संरचना अनुसार। यी कणहरु को मूल धूमकेतु मा छ, र धूमकेतुहरु आफ्नो सामग्री गुमाउँछन् र पछाडि छोड्छ।
यदि कण धेरै ठूलो छ (केहि सेन्टिमिटर), शुटिंग स्टार धेरै उज्ज्वल हुनेछ, जसलाई फायरबल भनिन्छ। के हामी देख्छौं त्यसको वरिपरि आयोनाइज्ड हावाको बलहरू छन्। कारहरूको चमक दर्शक हो, तिनीहरूलाई दिनको पनि सुन्दर देखिन्छ। केहि तिनीहरूको मार्गमा भ break्ग हुन सक्छ, चमक वा साना विस्फोटहरू देखाउँदछ, वा ध्वनि बनाउन सक्छ। तिनीहरू प्राय: लगातार ट्रेल छोड्दछन् (यो ionized हावाको ट्रेल हो जुन तिनीहरू पछाडि छोड्छन्) वा धुम्रपान गर्छन्। कहिलेकाँही ती उज्यालो हुन सक्छ बादलको पछाडि देखिन, त्यसैले कहिलेकाँही हामी बादललाई एकै क्षणको लागि देख्न सक्दछौं।
ती कहिले देख्न सकिन्छ?
शुटि stars सिताराहरू कुनै पनि स्पष्ट रातमा अवलोकन गर्न सकिन्छ, यद्यपि बर्षको केही रातहरूमा, तिनीहरू अधिक प्रचुर मात्रामा हुन्छन् र वायुमण्डलीय घर्षणले धेरै किलोग्राम तौलका उल्कालाई जलाउन सक्छ। यद्यपि, कण धेरै ठूलो छ भने, यो पूर्ण रूपमा सड्न र पृथ्वीको सतहमा पुग्न सक्षम नहुन सक्छ। त्यसैले उल्कालाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। हाम्रो ग्रहले माइक्रोस्कोपिक आकार र त्यस भन्दा पनि ठूलोको उल्का पिण्डहरू प्राप्त गर्दैछ।
सबैभन्दा ठूलो उल्का वर्षाको एक पर्सीदको मामला हो, सेन्ट लॉरेन्सको आँसुको रूपमा चिनिएको। जहाँ हामी तिनीहरूलाई अगस्टको मध्यतिर आकाशमा ठूलो सम्भावनाको साथ देख्न सक्दछौं।
यदि तपाईं एक शुटि star तारा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केही सिफारिसहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ। आकाशमा हेर्नु र शुटिंग स्टार हेर्नका लागि बाहिर जानु सुरक्षित हुँदैन। तर हो, यी सिफारिसहरू पालना गरेर हामी कुनै एउटाको सम्भावना बढाउन सक्छौं। यी सिफारिसहरू के हुन् हेर्नुहोस्:
तपाईंले रातमा शहर छोड्नुपर्नेछ र मैदानमा अवलोकन बिन्दु खोज्नु पर्छ जहाँ आकाश पूर्ण रूपमा सफा छ र त्यहाँ कुनै वा कम प्रकाश प्रदूषण छैन। आजकल ताराहरूको आकाश देख्नको लागि एक महान समस्याहरू शहरहरूद्वारा उत्पन्न प्रकाश प्रदूषणमा रहन्छ। हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि कृत्रिम प्रकाशको अस्तित्वले रातको आकाशलाई बाधा दिन्छ। तसर्थ, यदि हामी बसोबास गर्ने शहर धेरै भीड र उज्यालो छ भने, हामी धेरै टाढा सर्नुपर्नेछ ताकि यसले हामीलाई असर नपरोस्।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि आकाश पूर्ण रूपमा खाली छयसमा बादलहरू भएकाले हामी ताराहरू देख्न सक्षम हुनेछौं। पूर्णिमाका रातहरूमा ताराहरू खिच्न पनि यो सिफारिस गरिएको छैन। यो किनभने पूर्णिमाको प्रतिबिम्बले पनि हल्का प्रदूषण निम्त्याउन सक्छ र अन्य ताराहरूको हाम्रो दृष्टि केही हदसम्म अवरोध गर्न सक्दछ।
आदर्श भनेको नयाँ चन्द्रमाको साथ पूर्ण रातको लागि हेर्नु हो.
दूरबीन वा टेलिस्कोपको प्रयोग छैन। ना ob्गो आँखाले गर्दा र तपाईंको आँखा अँध्यारो र स्टारलाइटमा समायोजित भएपछि प्रत्यक्ष अवलोकन धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
उत्पत्ति र शुटिंग स्टारको इतिहास
शुटि stars ताराहरू टाढाको उज्यालो ताराहरू जस्तो देखिन्छन् जुन रातको आकाशबाट पार गर्दै थिए। यद्यपि शुटि star्ग स्टार कुनै तारा होइन र यो निकै टाढा पनि छैन। प्राचीन समयमा, मानिसहरु लाई meteors मौसम को एक हिस्सा हो, बिजुली वा बाक्लो कुहिरो लाग्यो। तर अब हामी जान्दछौं कि शूटिंग ताराहरू वास्तवमै बाह्य अन्तरिक्षका वस्तुहरू हुन्। अन्तरिक्षमा तैरिरहेको विभिन्न आकारहरूको रक टुक्रा। यिनीहरूका केहि चट्टानहरू, जसलाई मेटेरियोइड्स भनिन्छ, भुईँमा र हाम्रो वातावरणमा आकर्षित हुन्छन्। पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको कार्यको लागि आंशिक रूपमा आकर्षण हो, त्यसैले ठूला ग्रहहरूमा यी वस्तुहरू आकर्षण हुने बढी सम्भावना हुन्छ।
यी चट्टानहरू (अधिकतर बालुवाको अन्नको आकार) जमीनको नजिक आउँछन् प्रति सेकेन्ड kilometers० किलोमिटरको गतिमा, र हावाको घर्षण तिनीहरूलाई तारा जस्तै चम्के सम्म तिनीहरूलाई तातो। जब तपाईं एक शुटि star तारा देख्नुहुन्छ, तपाईं वायुमण्डलमा बल्दै गरेको उल्का हेर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईंले द्रुत शुटि star तारालाई देख्न सक्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा हराउनुभन्दा पहिले एक वा दुई भन्दा लामो समय सम्म रहँदैन। केहि उल्काहरू जुन पृथ्वीमा पुग्छन् हामीहरूको वायुमण्डलमा पूर्ण रूपमा खपत हुँदैनन्। लगभग million 75 मिलियन उल्का प्रत्येक दिन हाम्रो वातावरणमा टकराउँछन्।
हामीले उल्लेख गर्नुपर्दछ कि चम्किलो ताराहरूको चमक र आवृत्ति एकदम भिन्न हुन्छ। हामी सानो आकारको, कम चमकको शुटि shooting ताराहरू, र थोरै चम्किलो र त्यसकारण ठूला ती सानो संख्याको अवलोकन गर्दछौं।
जब शुटि shooting तारा पर्याप्त ठूलो हुन्छ, हामी याद गर्न सक्दछौं कि यसले ionized हावाको ट्रेसहरू छोड्दछ जुन केहि मिनेटहरू सम्म टिक्न सक्छ। शुटि star स्टारको पुच्छल चम्किन्छ र यसको रंग आयोनाइज्ड ग्यासमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, हरियो ट्रेल आयन (वायुमंडलीय) अक्सिजन को कारण हुन सक्छ। यसबाहेक, शुटिंग स्टारको वाष्पीकरण गर्ने तत्त्वहरूले यसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रमसँग मिल्दो र produce्ग उत्पादन गर्दछ, र यो गिरावटमा पुगेको तापमानमा पनि निर्भर गर्दछ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाई शूटिंग ताराहरु र उनीहरुको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » शुटिंग स्टार